कमेडी च्याम्पियन दोस्रो सिजनको उपाधि भरतमणि पौडेलले जितेका छन् । फाइनलमा विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापालाई पछि पार्दै ताप्लेजुङका भरतमणिले उपाधि चुमेका हुन् । थप पढ्नुहोस् +
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले खर्बौं रुपैयाँ तलमाथि पर्नेगरी सेटिङमा करका दरहरु हेरफेर गरेको बताएका छन् । शनिवार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आठौँ केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सेटिङमा भन्सार छुट दिने गरेर अरबौँको खेल गरेको बताए । थप पढ्नुहोस् +
शनिबार जनकपुरमा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर २ को प्रशिक्षण कार्यक्रमको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसीभन्दा गठबन्धन महत्वपूर्ण रहेको बताए। थप पढ्नुहोस् +
खानेपानी मन्त्रालयले शिवरात्रिका दिन वाग्मतीमा मेलम्चीको सफा पानी बगाउने भनेको थियो । आज शिवरात्रिका दिन मेलम्चीको पानी वाग्मतीमा आउन त आयो । सफा भने होइन लेदो पानी आयो । त्यो… थप पढ्नुहोस् +
चाडपर्व नजिकिएसँगै नेपालको अटो बजार चलायमान भएको छ । नेपालमा सवारीसाधनको कुम्भ मेला मानिने नाडा… थप पढ्नुहोस् +
दोलखामा भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । अनुदान सम्झौता सुरु गरेको सिंगटीबाट शुक्रबार राष्ट्रिय… थप पढ्नुहोस् +
कलाकार शम्भुराज थापाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । तीन दशकदेखि कलाकारितामा सक्रिय ५५ वर्षीय… थप पढ्नुहोस् +
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सबै दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। थप पढ्नुहोस् +
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्थ ठाकुर पक्षका नेता राजेन्द्र महतोले ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’ स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । थप पढ्नुहोस् +
व्यवसायी राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरेकामा बाबुराम भट्टराई आक्रोशित
कोरोनाको कारण प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था बन्द रहेका छन्। अनलाइनको माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित नभएको भन्दै कोरोना संक्रमण घटेकोले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने एन प्याबसन धनुषाका निवर्तमान सचिव डिके चौधरीले बताए। थप पढ्नुहोस् +
विश्वमा हरेक दुईमध्ये एक बालबालिका जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक प्रभावको शिकार हुने अवस्थामा रहेका यूनिसेफले… थप पढ्नुहोस् +
भारतीय नागरिकसँग १३ हजार नेपाली नक्कली नोट
ट्वीटरले ब्लु चेक मार्क भेरिफिकेसन पुनः बन्द गरेको छ । करिब चार वर्षपछि कम्पनीले खुलाएको ब्लु चेक मार्क भेरिफिकेसनले धेरै प्रयोगकर्तालाई खुशी बनाएको थियो । थप पढ्नुहोस् +
वरिष्ठ पत्रकार मल्ल के सुन्दरको नेपाल भाषामा नयाँ उपन्यास ‘सेप्टेम्बर १७’ विमोचन गरिएको छ । नेपाल भाषा एकेडेमीले प्रकाशित गरेको यस उपन्यासको जनकवि दुर्गालाले श्रेष्ठले विमोचन गरे । थप पढ्नुहोस् +
चाडपर्व नजिकिएसँगै नेपालको अटो बजार चलायमान भएको छ । नेपालमा सवारीसाधनको कुम्भ मेला मानिने नाडा अटो शो हुन नसकेपनि यतिबेला ग्राहकहरू गाडी खरिदका लागि शोरुम नै धाउन थालेका छन् । ग्राहकलाई… थप पढ्नुहोस् +
सुजुकी एक्सचेञ्ज २०७८ सुरु
एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ छनोटको पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ । शनिबार उज्वेकिस्तानमा भएको खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग २–१ गोलको हार बेहोरेको हो । थप पढ्नुहोस् +
एचटूओका रविन थापा र एपीएफका प्रदीप महर्जन आइबा पुरुष विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका लागि सञ्चालित खुला छनोट प्रतियोगिताको ५१ केजीतर्फ फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । थप पढ्नुहोस् +
पाँच महिनाको अन्तरालमा दिएको कोभिशिल्ड र एस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्राले पनि काम गर्ने जनाइएको छ । थप पढ्नुहोस् +
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोहोरिएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा आफूलाई चिन्ता लागेको बताएका छन् । थप पढ्नुहोस् +
अहिलेसम्म त्यस्तो टेलिफोन, वार्ता, संवाद केही पनि भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ त म देख्दिनँ, किनभने त्यो राजनीतिक फैसला हो । तैपनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई… थप पढ्नुहोस् +
आफ्नो प्रिय मानिससँग अंकमाल गर्न कसलाई मन नहोला र ? अंकमालको कल्पना मात्रले पनि मानिसको… थप पढ्नुहोस् +
कस्तो छ अजय देवगनको ‘भुज द प्राइड अफ इन्डिया’
बिग बोस ओटीटी : टास्क जित्नका लागि नेहाले रिद्धिमालाई गरिन् ‘लिप किस’
‘बोल्ड सिन’ दिएकी राधिका आप्टेलाई बहिस्कार गर्न ट्वीटरमा अभियान
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ खजुरास्थित मानसरोबर होटलबाट एक थान रेडपाण्डाको छालासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। थप पढ्नुहोस् +
अफगानिस्तानबाट शुक्रबारसम्म ४६१ नेपालीको उद्धार भएको छ । थप पढ्नुहोस् +
चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीजीटीएन टीभिलाई अन्तर्वार्ता दिँदै तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई तालिबानी सरकार स्वीकार गर्न अपील गरेका हुन् । थप पढ्नुहोस् +
आज २०७८ भदौ ५ गते शनिबारको राशिफल
आज २०७८ भदौ ५ गते शनिबारको राशिफल । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ… थप पढ्नुहोस् +
जून त्यो जून